Linux တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အက်ပလီကေးရှင်းများ Linux မှ
အကြိမ်များစွာဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤနှင့်အခြားမီဒီယာသို့မဟုတ်အင်တာနက်လိုင်းများတွင်အသုံးပြုခြင်းကိုအသုံးပြုသည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များထိုသို့သောအဖြစ် GNU / Linux များ ကြီးမား။ ကြီးထွားလာသော၊ အကျိုးရှိပြီးထိရောက်သောအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အတူလွတ်လပ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်စေ Distros နှင့် Apps များ ရရှိနိုင်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လက်လှမ်းနှင့်လက်တွေ့ကျတဲ့ အိုင်တီဖြေရှင်းချက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်းများကိုများအတွက်ဖြစ်ပါသည်, သော အလုပ် ထဲမှာ နေအိမ် နှင့် ရုံး.
ဒီအကြောင်းပြချက်အတွက်, ဒီပစ္စုပ္ပန်ထုတ်ဝေအတွက်ကျနော်တို့၏သေးငယ်တဲ့ updated compendium ပူဇော်ပါလိမ့်မယ် «အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ» ကွဲပြားခြားနားသောအတွက်ရရှိနိုင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်ကွင်း အတွက် အလုပ် ကနေ အိမ် o စီးပွားရေးလုပ်ငန်း.
1 အပြုသဘောဆက်ဆံရေး: SL / CA + ဟာ့ဒ်ဝဲ + အလုပ်
1.1 အဓိက Operating System များအနေဖြင့် GNU / Linux Distros ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
1.1.1 သုံးစွဲသူများအတွက်လွတ်လပ်မှု၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်အိုင်တီလုံခြုံရေးပိုမိုများပြားလာအောင်လုပ်ပါ
1.1.2 ကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်း (သို့ / ဆာဗာများ) ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသည်။
2 ပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံး SL / CA အပလီကေးရှင်း
2.1 ရုံးလုပ်ငန်း၏ထိပ်ဆုံး ၁၀
2.2 မာလ်တီမီဒီယာနယ်ပယ်၏ထိပ်ဆုံး 10
2.3 ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ထိပ်တန်း 10
2.4 အခြားအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းအခမဲ့၊ စီးပွားဖြစ်အက်ပ်များ
အပြုသဘောဆက်ဆံရေး: SL / CA + ဟာ့ဒ်ဝဲ + အလုပ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းဖေါ်ပြခြင်းမပြုမီ « Linux တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အက်ပလီကေးရှင်းများ» သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် operating system သဟဇာတ Windows နဲ့ MacOSမီးမောင်းထိုးပြသင့်သောအချို့သောရှုထောင့်များ၏အရေးကြီးပုံကိုထောက်ပြခြင်းသည်ကောင်း၏။ အောက်ပါတို့မှာ -
အဓိက Operating System များအနေဖြင့် GNU / Linux Distros ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ဒါကများသောအားဖြင့် Home မှာရောကုမ္ပဏီများမှာပါ။ ထို့အပြင်အရေးကြီးဆုံးမှာဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်များသည်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၏တိုက်ခိုက်မှုခံရနိုင်ခြေနည်းပါးသောကြောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ အထောက်အပံ့နှင့်ပြုပြင်ခြင်းများမှအချိန်ဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားသည်။ နှင့်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများအမြောက်အများကိုအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းပြီးအခမဲ့၊ စီးပွားဖြစ်နှင့်စီးပွားဖြစ်များကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဟောင်း၊ စျေးပေါ၊ ရိုးရှင်းသည့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များနည်းပါးသည်။
ကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်း (သို့ / ဆာဗာများ) ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသည်။
GNU / Linux ကိုအသုံးပြုထားသောကွန်ပျူတာများနှင့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအက်ပ်များသည်အပူလျော့နည်းစေပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။ အထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာများကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသောအခါအကျိုးရှိသည်။ ဆက်သွယ်မှုများကိုအလွဲသုံးစားမှု၊ အင်တာနက် bandwidth သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များမြင့်မားစွာသုံးစွဲခြင်း (Disk, CPU နှင့် RAM) တို့နှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာအနည်းငယ်သာရှိသည်။
၎င်းသည်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော Distros နှင့် Apps များသည်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်သွယ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိခြင်း၊ နောက်ကွယ်တွင်သူတို့၏ဖန်တီးသူများသို့မဟုတ်တတိယပါတီများအားတရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိ၊ နောက်ဆုံးသတင်းများ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာများသောအားဖြင့်ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုမလိုအပ်သောအသုံးချခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုသေးငယ်ပြီးပိုမိုပေါ့ပါးလာသည်။
အစတွင်ပြောင်းလဲရန်ခုခံမှုသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ဤနည်းပညာ၏ဘေးထွက်သည် Operating System ၏ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက်ပြောင်းလဲရန်နှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်စွမ်းအားပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်ပြeshနာဖြေရှင်းရန်ခွင့်ပြုထားသောအသုံးပြုသူနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုပိုမိုပေးသည်။
ထို့အပြင်၎င်းတို့သည် Operating System နှင့် Applications နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းအားလေ့လာခြင်း၊ သင်ကြားခြင်းနှင့်ကူညီခြင်းပြုလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသောသုံးစွဲသူများ၊ အုပ်စုများ (သို့) အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ပိုမိုတွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းတို့အားပိုမိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်စာဖတ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေ့လာခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စာရွက်စာတမ်းများသည်များသောအားဖြင့်ထိုဘာသာစကားဖြင့် ပို၍ များပြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးကိုလေ့လာပြီးပါက၊ ၎င်းသည်စာရင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးနောက်၊ « Linux တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အက်ပလီကေးရှင်းများ» အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့သူတို့ကဒီခေါင်းစဉ်ထဲကိုလေ့လာချင်တယ် SL / CA နှင့်အလုပ်နှင့်ကုမ္ပဏီများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါယခင်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာပေများကိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။
"ယနေ့အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်များကိုသူတို့၏စီးပွားရေးပုံစံများ၊ ဆိုလိုသည်မှာအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောနည်းပညာများသည်၎င်းတို့ပိုင်ရှင်များ၊ ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်၎င်းတို့ထဲမှထွက်ပေါက်နှင့်ထွက်ခွာရန်အတွက်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းနှင့်များသောအားဖြင့် လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အချိန်နှင့်အမျှ ပိုမို၍ သုံးစွဲနိုင်သောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုတို့ဖြင့် Cloud နှင့်အခြားနည်းပညာအသစ်များဆီသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်ခေတ်မီခြင်းတို့ကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်။" GAFAM Open Source - နည်းပညာအရင်းအမြစ်များကို Open Source ၏မျက်နှာသာပေးသည်
ပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံး SL / CA အပလီကေးရှင်း
စီစဥ် PDF ကိုစီစဉ်ပါ
မှတ်ချက်ဖြေ - Linux အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့တခြားအခမဲ့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Office Suites တွေကိုလေ့လာဖို့ WPS ရုံးအောက်ပါသို့သွားပါ link ကို.
မှတ်ချက်ဖြေ - Linux အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အခြားအခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ အခမဲ့နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအခြားရွေးချယ်စရာ multimedia app များကိုလေ့လာရန်၊ link ကို.
အခြားအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းအခမဲ့၊ စီးပွားဖြစ်အက်ပ်များ
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" လူသိအများဆုံး၊ အသုံးပြုသောနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အချို့အကြောင်း «Mejores apps» de «Software Libre y Código Abierto»သူ့အဘို့အရရှိနိုင်ပါ ပညာအရည်အချင်းဆိုလိုသည်မှာ အလုပ်နှင့်စီးပွားရေး; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Linux တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အက်ပ်များ
Deepin 20.2 သည်တိုးတက်မှုများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရောက်ရှိသည်